मासिक राशिफलः यी ७ राशिका लागि शुभ छ जेष्ठ महिना, तपाईको कुन ? – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/मासिक राशिफलः यी ७ राशिका लागि शुभ छ जेष्ठ महिना, तपाईको कुन ?
सिंह राशि हुने व्यक्तिका लागि यो महिना कुनै पक्षमा सुधार त कुनै पक्षमा अबरोधयुक्त रहने छ। केही उन्नति एवं उपलब्धिमूलक र केही सफलता मिल्ने छ। पेशागत प्रतिष्ठा बढ्ने छ। राजनीति एवं सामाजिक भूमिका बढेर जाने छ।
तुला राशि हुनेहरूका लागि यो महिना मिश्रित छ । संघर्ष एवं अबरोधको सामना गर्न पर्ने र स्वास्थ्यमा पनि केही प्रतिकूलता देखिने छ। आहारविहारमा ख्याल पुर्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ। विपक्षी सक्रिय रहने तथा विश्वासघात र आरोप्रत्यारोपको सामना गर्नु पर्नेछ।
बृश्चिक राशि हुने व्यक्तिका लागि यो महिना त्यति सहज देखिएको छैन्। महत्त्वपूर्ण काममा रोकावट आउनसक्ने छन्। दैनिक पेशा तथा व्यवसायको क्षेत्रबाट सामान्य लाभ हुल्नेछ । दाम्पत्य कष्ट तथा प्रेममा बाधा उत्पन्न हुनेछ।
धनु राशि हुनेहरूका लागि यो महिना केही पक्षमा अनुकूल छ। अधुरा कामकार्यहरुलाई पूर्णता दिन सकिने छ । तथापि व्यक्तित्त्व एवं कर्मक्षेत्रको प्रतिष्ठा बचाउन निकै व्यवहारिकता र संयमको जरुरी पर्नेछ। शिक्षा व्यवसायी र विद्यार्थीका लागि समय सफलताकर रहेको छ।
मकर राशिका लागि यो महिना आंशिक सुधार हुनेछ । र पनि विशेष महत्त्वपूर्ण कामहरुमा अड्चन आउने छन्। सामान्य कामकार्यहरुमा भने केही सफलता मिल्ने छ। पारिवारिक एकताबाट विशेष कठिनाईलाई निवारण गर्नसकिने छ।
कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूले यो महिना अल्लि सावधानी अप्नाउन पर्नेछ । होस् भनेको काममा अबरोध भएपनि नसोचिएको काम बनेर अप्रत्यासित लाभ भने हुनसक्ने छ । र पनि कामकार्यमा अनायाशै अवरोध आइपर्न सक्नेछ ।
मीन राशि हुनेहरूका लागि यो महिना अल्लि अलमल रहने छ। कुनै पक्षमा लाभ त कुनै पक्षमा क्षतिखति हुनसक्ने देखिएको छ। वाणी एवं समय र अवसरको सदुपयोग गर्नाले मान्छेको मन जित्न र पेशाबाट आर्थिक लाभ गर्नसकिने छ। पुरुषार्थ तथा शारीरिक जोशजाँगर बढेर आउने छ।
बि. सँ.२०७७ साल भाद्र १३गते शनिवारको राशिफल हेर्नुहोस
अत्यन्तै दुखद खबर भखरै रोल्पामा २३वर्षको विजय खत्रीको मृत्यु